डिभिजन टू खेल्ने नेपाली टोलीमा रोहितकुमार र अनिलले पनि बनाए स्थान को–को परे टिममा ? – सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
डिभिजन टू खेल्ने नेपाली टोलीमा रोहितकुमार र अनिलले पनि बनाए स्थान को–को परे टिममा ?
प्रकाशित मिति : २०७४ माघ ११
काठमाडौं, ११ माघ । युवा क्रिकेटर रोहितकुमार पौडेल र अनिलकुमार साह राष्ट्रिय टोलीमा स्थान बनाउन सफल भएका छन् । विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन टूका लागि पारस खड्काको कप्तानीमा १४ सदस्यीय नेपाली टोलीको घोषणा भएको छ । टोलीमा अनिल र रोहितले पनि स्थान बनाएका छन् ।
यू–१९ का रोहित पहिलो पटक राष्ट्रिय टोलीमा परेका हुन् । हालै काठमाडौंमा सम्पन्न एभरेष्ट प्रिमियर लिगमा राम्रो प्रदर्शन गरेका उनी ‘मोस्ट भ्यालुएबल प्लेयर’ बनेका थिए ।
अनिल पनि राष्ट्रिय टोलीमा परेको भने पहिलो पटक हो । यद्यपी विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनपसिपको अन्तिम खेलमा यूएईविरुद्ध खेल्नु अघि दिपेन्द्र सिंह ऐरी घाइते भएपछि अनिलकुमार साहलाई टिममा बोलाइएको थियो । तर, उनले खेल्ने मौका पाएनन् ।
अरु को को छन् टिममा ?
ज्ञानेन्द्र मल्ल उपकप्तान रहेको टोलीमा शक्ति गौचन, बसन्त रेग्मी, शरद भेषावकर, सोमपाल कामी र आरिफ शेख छन् । यस्तै सन्दिप लामिछाने, दिपेन्द्र सिंह ऐरी र दीलिपनाथ र ललित भण्डारी पनि टोलीमा अटाएका छन् । दिलिपनाथ र ललितले यूएईविरुद्ध खेल्ने मौका पाएका थिए । सुनिल धमला, ललित नारायण राजवंशी, सिद्धान्त लोहनी र किशोर महतो वैकल्पिक खेलाडीमा परेका छन् । डिभिजन टू अर्को महिना नामिबियामा हुँदैछ र नेपालले आफ्नो पहिलो खेल फेब्रुअरी ८ मा घरेलु टोलीविरुद्ध खेल्नेछ ।
काठमाडौं, जेठ ६ । जारी आइपीएल सीजन–११मा डिल्लीको...
उत्कृष्ट युवा खेलाडी बने सन्दिप
काठमाडौं, जेठ ३ । पल्सर स्पोर्टस अवार्डमा चार...
आईसीसी विश्व ११ मा परे सन्दीप, लर्ड्समा वेस्टइन्डिजको विरुद्ध खल्ने
काठमाडौं, जेठ २ । नेपाली युवा क्रिकेट सन्दीप...
नेपाली फुटबलका पूर्वकप्तान मणिविक्रम शाहको निधन
काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका...
२०७४–चुनाव, mainNews, National News ... , Sports Read More
रोमासँग हारे पनि चाम्पियन्स लिगको फाइनलमा लिभरपुल
काठमाडौं, वैशाख २० । बुधबार राति भएको दोस्रो लेगमा...